Sidee Heikin Ashi, Lacagta Shirkadda Isgaadhsiinta ah, Waxay kaa caawineysaa inaad ka fogaato qaylada suuqa Suuqa | FXCC Blog
Oct 31 Qiimaha Ganacsi ee Forex • 26929 Views 4 Comments ku saabsan sida Heikin Ashi, Isku-shaashooyinka Iskudhafka ah, Waxay kaa caawin karaan inaad ka fogaato duufaanta suuqa Suuqa
Waxaa jira shumacyo badan oo la yiraahdo shineemo Japanese ah kuwaas oo soo saari doona shumacyada Heikin-Ashi sida; sidoo kale fududayn, marin habaabin iyo mararka qaarkood oo ay waxtar leeyihiin. Cabashada ugu caansan waa HA in lagu barbardhigo shumaca tooska ah ee shumaca Japan iyo in la keeno gelitaan dambe markaad raadineyso ficil qiimaha. Doodda macaamilku waxay noqon doontaa mid la mid ah tilmaamayaasha kale HA waa in loo adeegsadaa habab kale oo khariidad ah oo loo isticmaalo si sax ah (iyada oo loo eegayo xaddiga isticmaalka loogu talagalay) si loo hubiyo in ganacsatadu ay helayaan ugu wanaagsan ee ka muuqda tilmaamaha.
Waxaa haboon in guriga la dhigo dhaleeceynta ugu muhiimsan daqiiqad, arimaha la xiri karo. Iyadoo aan shaki ku jirin in waxoogaa lagama maarmaanka ah "qaladka" ee HA la caddeeyey 'HA' badanaa wuxuu ku dhiirri-galiyaa ganacsadaha in uu la socdo isbedelka ilaa dhammaadka, iyo inta uu dhaleeceynayo ficil-celinta qiimaha ee la ansixiyay, markii uu galay ganacsiga adoo isticmaalaya HA inta badan waa ka badan tahay in ay joogaan oo aan been aheyn. Waxyaabaha kale ee aan la ogeyn waxay u badanyihiin isticmaalka HA, tusaale ahaan, xakamaynta la siiyay HA waa mid ka mid ah qalabkii ugu fiicnaa ee la heli karo si loo xaddido dhawaaqa suuqyada. HA waa mid ka mid ah farsamooyinka ugu cad ee muujinaya isbeddellada iyo dib u celinta la heli karo. Xogta Ichimoku oo la mid ah, Heikin Ashi wuxuu ahaa aalad ganacsi oo aan la garanaynin iyo tilmaame qiimeeya oo dhawaan ku riyaaqay inuu kordho caan ka mid ah, inkasta oo la heli karo tan iyo markii la soo geliyey labaatankii sano ee hore. Taasi waxay kordhinaysaa wacyiga iyo caan-beelka ayadoo laga yaabo inay sii kordhayso doorka HA-ga ee ku yaala baakado badan oo khariidado ah.
Si ka duwan shumaca caadiga ah ee Japan, Heiken-ashi ma qeexayo: furan, sare, hooseeya oo kudhaca shumac kasta. Qiimaha bedelka waxaa loo xisaabiyaa shamac kasta oo ku salaysan awoodda ugu weyn ee suuqa iyadoo la isticmaalayo celcelis ahaan. Tusaale ahaan, haddii iibiyayaashu ay si cad u sarreeyaan, shamaca Heiken-ashi ayaa noqon doona mid ciriiri ah, xitaa haddii qolka qiimaha uu xiran yahay kan ka sareeya. Shumacyada Heiken-ashi waa argagax leh qalab fiican oo loogu talagalay ganacsatada kuwaas oo jecel inay raacaan isbeddellada si buuxda. Heikin-ashi ee muuqaalkiisa fududi waxay u sahlanaataa in la aqoonsado, iyo natiijada marxalado badan oo aad u sahlan in go'aan laga gaaro.
Ganacsatada tafaariiqiga ahi waxay aqbalaan in inta badan faa'idadoodii la abuuray marka suuqyadu ay soo socdaan, saadaalinta isbeddellada saxda ahi waa muhiim. Ganacsatada badankood waxay isticmaalaan shaxmaasada shamaca si ay uga caawiso helitaanka isbeddellada noocan oo kale ah isbedelka suuqyada suuqa, awoodda HA si ay u cirib tirto buuqa waa mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee ka sarreeya kororka qiimaha kale ee qiimaha. Farsamada Heikin-Ashi, oo macneheedu yahay "celceliska bar" ee Japanese, shaki la'aan waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta isdhexgalka.
Waxaa jira dhowr qaab oo fudud oo leh HA oo bixiya calaamado, caawimaad si loo aqoonsado isbeddellada iyo sidaas darteed fursadaha ganacsiga:
Shumacyada Hollow oo aan lahayn hooskii hooseeya ayaa muujinaya kor u kac weyn. Shumacyada Hollow waxay muujinayaan kor u kac
Mid ka mid ah shumac leh jir yar, oo ku hareereysan hooska hoose iyo hoose, waa calaamad xoogan oo ah isbeddel isbedel ah oo dhici kara
Shumacyada la buuxiyay waxay muujinayaan hoos u dhac
Shumacyada la buuxiyay oo aan lahayn soodhadh ka sareeya waxay muujinayaan hoos u dhac xoog leh
Kuwani waxay sahlan yihiin in la ogaado tusaalooyinka qaababka shamaca ee si sahlan loo aqoonsan karo iyo calaamadaha muujinaya in aqoonsiga isbeddelka iyo fursadaha ganacsiga ay ka fududaan karaan HA. Isbeddelka aan marar badan la gooyin calaamadaha been abuurka ah iyo natiijada ayaa si sahlan loo aqoonsan karo. Iyadoo la adeegsanayo qaababka shumaca ee fudud ee saddexda dhacdooyinka suuqyada waawayn waxaan raadineynaa si aan u horumarino ganacsatada si toos ah; shariikadaha, shilalka iyo xaaladaha dib u dhaca ayaa halkan lagu daboolayaa.
Mucjiso Shumacyada Bulshooyinka
Marka suuqa, shumacyada Heikin-Ashi waxay leeyihiin meydarro waaweyn iyo hoos hoosaad hoose laakiin aan lahayn hoos hoos, tusaalooyinka ayaa muujinaya tan. Ku dhowaad dhammaan shumacyada waxay leeyihiin jirro waaweyn, hooskii sare ee dheeraa iyo hooskii hooseeya.
Daahinta Shumacyada Baashaalka
Markuu suuqku yahay "Bearish, shumacyada Heikin-Ashi waxay leeyihiin meydad waaweyn iyo hoos hoosaad hoose oo aan lahayn hoostooda sare, tusaalooyinkuna waxay muujinayaan tan. Ku dhowaad dhamaan shumacyada waxay leeyihiin jirro waawayn, hooskii hoose ee hoose iyo hooskii sare.
Shumacyada Dib u Dhaca
Shumacyada dib u dhaca ee Heikin-Ashi waxay u egyihiin sida Doomi shamac. Waxay leeyihiin jimicsi ama mid aad u yar, laakiin hoos hoosaadka sare iyo hoose.
Heikin-Ashi wuxuu ku haboon yahay inuu ganacsiga oo dhan ku iibsado lacag, ganacsatada badan waxay helayaan labo diyaarsan sida GBPJPY iyo EURJPY si sahlan u ganacsiga isticmaalka HA. Waxay cadeeyn kartaa inuu yahay tusaha aadka loogu kalsoon yahay ee ganacsiga gudaha iyo lafdhabarta wareegyada wakhtiyada hoose sida: 15min, 5min iyo 1min. Si kastaba ha ahaatee, faa'iidooyinka ugu muhiimsan waxaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay inay eegaan isbeddellada ganacsiga inta lagu gudajiro wakhtiyada dheeraadka ah sida saacadaha iyo saacadaha 2-4. Heikin-Ashi sidoo kale waa qalab ganacsi oo wanaagsan oo loogu talagalay ganacsatada qulqulaya. Heikin-Ashi wuxuu kor u qaadi karaa dulqaadayaasha ganacsadaha dhiirigelinta qaadashada qaabab ganacsi oo wanaagsan iyo faa'iido leh oo la siiyay awoodda ay ku tirtiri lahaayeen dhawaaqa suuqyada.
Marka laga soo tago muujinta awoodda qaraabada ee isbeddelka HA waxay tilmaamaysaa dhibcooyinka muhiimka ah ee ficilka qiimaha iyo ka jawaab celinta hab isku mid ah celceliska dhaqdhaqaaqa. Ku darista dhaqdhaqaaqa shaxda (shaashad, furan, sare iyo hoose), HA waxay u simeysaa isbeddellada isbeddelka suuqyada suuqyada iyo baabi'iyo qashinka laga yaabo in ay keenaan isbeddel ama boodid deg deg ah qiimaha, hel sawir muuqaal ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa suuqa oo sidaas darteed samayn kara go'aammo ganacsi oo la fahmi karo.
Heikin Ashi waa qalafsan yahay sababtoo ah halkii uu isticmaali lahaa sahlan oo hooseeya ee xisaabinta si loo xisaabiyo shumacyada shakhsi ahaaneed, Heikin Ashi wuxuu qiimeeyaa qiimaha barafka wuxuuna isku celceliyaa si uu u abuuro "fadhi". Tani waa aasaas u ah isticmaalka guuleysta sida suuqyada suuqyada gaar ahaan waxay u muuqdaan inay bixiyaan buuq badan iyo buuqa suuqa marka loo eego suuqyada kale. Iyadoo la adeegsanayo naqshad horey loo qoondeeyey oo ah shay kasta oo ganacsi ah si loo dhiso shumacyada isku xigta, jaantuska HA wuxuu aad uga tarjumayaa ficilka qiimaha hoose;
Xidhan = (Fur + + sare + hoose + xir) / 4
Furan = [Furan (hore) + Xir (gadaal hore)] / 2
Heerka sare (Max, sare, Furan, Xir)
Low = Daar (Low, Fur, Dhow)
Iyada oo caantahani nooca HA ay ka goosanayso qiimaha marka laga reebo isbedelka suuqyada suuqa iyo buuqa. Nidaamka soo if-baxaya ma aha oo kaliya inuu ganacsade u arko muuqaal muuqaal rucubeed ah laakiin mid ka mid ah oo ka caawin kara helitaanka isbeddelka guud. Iyada oo sawir qalafsan, si tartiib tartiib ah u fududeeyeen, ganacsatadu waxay hagaajin karaan ganacsiga guud ahaan is dhexgalka isaga oo isku daraya Heikin Ashi iyada oo leh tilmaamo kale. Sida shaxan kasta oo kale, waxaa lagugula talinayaa in la ogaado tilmaamayaasha kale ee suurtagal ah in ay u bogaadiyaan qaabka ganacsiga shakhsiga ah markaad ku darayso arjiga HA. Tani waxay ka caawineysaa ganacsatada in ay abuuraan khiyaamooyinka hogaanka ee suuqa, caawinta cadeeyaha caddaynta, taageerada iyo iska caabbinta iyo bixinta xaqiijin dheeraad ah ee suurtogalka ganacsiga ee faa'iido u lahaanshaha.
Iyadoo ganacsatada qaarkood ay ka soo baxaan ulaha shumaca Japan ilaa HA ganacsato badan oo khibrad u leh ayaa soo jeedin doona in ay hagaajiyaan farsamada HA marka hore. Sida lagu sharraxay maqaalkani oo leh awood u leh inay si joogta ah u aqoonsadaan afar qaab oo kaliya iyo saddex dhacdooyin oo suuq ah oo muhiim ah waa inay bixiyaan jawaab-celin ku filan HA-da si ay u sameeyaan go'aanno wax ku ool ah oo sidaas darteed faa'iido leh. Farsamada HA si toos ah ayaa loo korsan karaa si toos ah marka la barbar dhigo habka barashada ee lagu lugeeyo ulaha shumaca Japan.
tilmaamayaasha forexheikin ashi shumac
« Sababta Maxay uga Qaybqaadataa Hawlgalku waxay u egtahay inay ka soo horjeesatay Pennies oo ku taal Front of the Steam-Roller Inay si daacad ah u qabato oo u xoojiso marka ganacsiga ganacsiga »